Maitiro Ekusarudza Iyo Yakakodzera Kubhadhara Gateway uye Ndeapi Akanaka? - Sarudza yako Kudonhedza Mentors kweDropshipping Course
Nezve Kudonhedza Academy sei Vhura Zvitoro Kubhadhara processor chii
Maitiro Ekusarudza Iyo Yakakodzera Kubhadhara Gateway uye Ndeapi Akanaka?
kana iwe tanga bhizinesi rekudonha uye vhura chitoro pa Shopify, WooCommerce, kana zvimwe ecommerce mapuratifomu, iwe unofanirwa kuziva nezve iyo kubhadhara gateway uye sarudza yako yekubhadhara zvitoro masuo kuti uite mashandiro. Suo rekubhadhara rakabatanidzwa muchitoro chako mashandisiro anoita vanhu mari kubva kuaccount yavo kuenda kune yako. Pasina mubhadharo wegedhi rekubhadhara, vatengi havazokwanise kubhadhara masevhisi kana zvigadzirwa zvavari kutenga online. Kune akawanda akasiyana ekubhadhara magedhi esarudzo anowanikwa. Uye neyakakodzera mubhadharo wegedhi, unogona kuita kuti zvive nyore kune vatengi kubhadhara zvigadzirwa zvako. Chinyorwa ichi chichaunza nzira yekusarudza chaiyo yekubhadhara gedhi uye ndeapi akanakisa ekubhadhara magedhi e chitoro chakadonha.
How To Sarudza Iyo Yakakodzera Kubhadhara Gateway
Iwe unofanirwa kufunga zvinotevera kuti usarudze iyo chaiyo yekubhadhara gedhi:
1. Inotsigirwa neyako e-commerce chikuva
Kune akasiyana ekubhadhara magedhi anowanikwa zvichienderana neakasiyana encommerce mapuratifomu kwaunovhura chitoro. Kana iwe ukashandisa Shopify, saka iwe uchazoda gedhi rinoenderana neiyo chaiyo chikuva.
Iwe unogona kutarisa kuti ndeapi maipi ekubhadhara ako e-commerce chikuva anoshanda nawo. Ingo pinda papuratifomu yepamutemo yekuwedzera katalog kana zvinyorwa uye utarise muchikamu che "kubhadhara".
Iko kune zvinyorwa zvekubhadhara magedhi anowanikwa pane epamusoro ecommerce mapuratifomu:
2. Tarisa kuchengetedzwa
Kuchengetedzwa kwenetiweki kunogona kudzivirira vatengi vako kunetsekana neruzivo rwavo rwemari uye nekuvimbisa vatengi vako kuti ruzivo rwemari rucharamba rwakachengeteka kana uchitenga kubva kuchitoro chako. Kuti uve nechokwadi chekuti gedhi rako rekubhadhara rakachengeteka, gara uchiongorora kuti vari PCI vanoenderana. Izvo zvakakosha kana uchigamuchira makadhi echikwereti online.
Iko kune ipfupi runyorwa rwekubhadharisa gedhi chengetedzo materu:
VerySuwo rega rekubhadhara rine yepamusoro-soro encryption (SSL encryption 128 Bit yakavharidzirwa) kudzivirira marudzi ese ekuputsa.
Chikamu chechipiri chekuchengeteka siginicha yedhijitari. Kunyangwe kana wekubira akawana ID yako account yako ichiri yakachengeteka nemasiginecha edhijitari.
Mushure mekusainiwa kwedigital kunouya Dynamic IPs, kana account yako ikashandiswa kubva kune imwe kero IP saka icharambwa.
3. Kuchenjerera kune mari
Ita shuwa yekunyatso tarisa chimiro chemubhadharo negedhi rako usati wazvipira kwariri kwenguva refu.
Kazhinji kazhinji, pane zvinhu zvitatu zvemutengo wekupedzisira tag:
Set-up mutengo: zvinosiyana kubva $ 0 - $ 250.
Mari yemwedzi nemwedzi: $ 10 - $ 50.
Mari yekuchinjana: Kazhinji, iri $ 0.00 - $ 0.25 + 1% - 5% pachiitiko chega chega. Iwe unofanirwa kubhadhara zvese zvakatemwa mubhadharo uye muzana wezviitiko.
Uye zvakare, panogona kuve nemimwe fizi, senge kubhadharisa mari yekubhadhara, kubhadhara mari yekubhadhara, kubhadhara mari, nezvimwe
Iyi inotevera ndiyo fizi iwe yaunogona kuzviita iwe uzive nezvayo:
Kutanga-kumusoro / muripo wepagore
Mari shoma pamwedzi
Marii yaunobhadhara kuendesa iyo mari kubva kuakaunti yevatengesi kuenda kuakaundi account yako.
Kana iwe uchida kugamuchira mari pamberi peyakajairwa kadhi rechikwereti nguva yakatarwa.
Kana iwe uine bhizinesi rine njodzi, vanogadzira vanogona kukumbira waranti yekutanga.
4. Zvakanaka ruzivo rwevatengi
Izvo zvinodikanwa kuti upe yakanaka uye inyore yekutenga ruzivo kune vatengi Dzivisa nhanho dzakawandisa, nguva yakawandisa, kana ruzivo rwakawanda rwevanhu kuitira kuti mutengi wako arege kutenga. Edza kutsvaga gedhi rekubhadhara iro rinokutendera iwe kuti ugamuchire ese makuru echikwereti uye madhibhiti makadhi, pamwe nekubatanidzwa nezvose zvikuru zvekutenga ngoro. Zvakare, iyo yekubhadhara yekugedhi inofanirwa kukwidziridzwa kune vanoshandisa nharembozha zvakare.
5. Shandisa inopfuura imwechete yekugedhi rekubhadhara
Iwe unofanirwa kushandisa rinopfuura rimwe gedhi rekubhadhara kuti zvive nyore kune vatengi uye kupa munhu wese dzimwe sarudzo. Dzimwe sarudzo dzino dudzira kune zvirinani kune mutengi uye kushomeka kukakavara pakubuda. Paypal inodiwa yekubhadhara gedhi nekuti inowanikwa mune dzakawanda nyika kutenderera pasirese iyo inobvumidza iwe kuti utengese pasirese. Uye iwe unofanirwa kuziva zvaunodiwa nevateereri nezvenzira dzekubhadhara uye woona kana iyo yekubhadhara gateway inovatsigira. Suo rega rega rekubhadhara rinotsigira nzira dzakasiyana dzekubhadhara.
6. Sarudza vatapi vane mukurumbira wakanaka
Kubhadhara kubhadhara kwakakosha kune rako bhizinesi. Iri izano rakanaka kushanda nemupi anopa ane mukurumbira wakanaka muindastiri. Kazhinji, chero bedzi iwe ukasarudza rakakura rekubhadhara gedhi uye processor iyo yanga iri mumusika kwechinguva, zvichave zvakanaka. Ive nekuchenjerera kuti vamwe vanopa mubhadharo vanga vaine matambudziko nekubuda. Uye vamwe vane mukurumbira mune mamwe madenderedzwa ekuvharira mari yevatengesi pasina chikonzero chakakodzera.
7. Rutsigiro runowanikwa
Tarisa uone kana mupi anopa live technical technical rutsigiro, zvirinani mukati meyakajairika maawa ekushanda. Saka unogona kukurumidza kugadzirisa chero hunyanzvi matambudziko. Mazhinji magedhi ekubhadhara haazotsigire ekugadzirisa mashandisirwo ane chekuita nebhizinesi rine njodzi. Kubhejera, zvemukati zvevakuru, kufamba, fodya, kuunganidzwa kwezvikwereti, fodya yemagetsi, kugadzirisa chikwereti, MLM ibhizimusi rine njodzi. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe unozofanirwa kusarudza mupi anonyanya kuita izvo zvinonzi "zvine njodzi" yekugadzirisa kubhadhara.
Akanyanya Kubhadhara Masuwo Ekudonhedza Zvitoro
PayPal ndeimwe yeanonyanya kushandiswa mubhadharo gedhi rekudonhedza zvitoro. Iyo inogamuchirwa pasirese mune dzinopfuura mazana maviri nyika. Hapana mubvunzo kuti inogona kuve inobatsira kuwedzera kune huru yekubhadhara gedhi. Ichaunza vatengi vazhinji kune saiti. Chii zvakare, kana iyo yekupedzisira mubhadharo gedhi rikaenda pasi nekuda kweimwe technical technical, PayPal inogona kuita seye backup. Inotsigira ese akakurumbira makadhi echikwereti, akadai seVisa, Mastercard, American Express, Citibank, nezvimwe.
Stripe inowanikwa mu Nyika dze34. Uye inokupa iwe kudzora kwakazara pamusoro peiyo Checkout chiitiko uye izvi zvinoita kuti ive inofarirwa. Iyo inozivikanwa kwazvo pakati peAmerican neCanada vanodonhedza. Uye zvakare isingakubhadharise iwe pamwedzi fizi. Uyezve, ine zvakawanda zvinobatsira uye zvine simba maficha, kubva mu - chitoro kubhadhara kune yakazara kuchengetedzeka uye mune-yakadzika dashboard. Uye zvakare, inogamuchira zvisarudzo zvakati wandei zvakasiyana zvekubhadhara, kusanganisira akawanda eWallets. Nekudaro, haigamuchire PayPal uye iwe unogona kushandisa akati wandei akasiyana maseti ekubhadhara kugadzirisa dambudziko. Uye zvakagadzirwa chaizvo kune vanogadzira izvo zvakaoma kubata.
Authorize.net parizvino inowanikwa mune dzinopfuura nyika makumi matatu nematatu. Iyo ndeimwe yekare-kare uye yakavimbika nzira dzekubhadhara dzinowanikwa kune vashandisi vekadhi rechikwereti. Chaizvoizvo, inotsigira ese makuru makadhi echikwereti - kusanganisira MasterCard, Visa, American Express, Diner's Club, Discover, uye JCB. Iyo zvakare inotsigira edhijitari yekubhadhara masevhisi senge Apple Pay, PayPal uye Visa Checkout. Uyezve, inoratidzira akawanda ekuwedzeredza ekubatanidza nyore nezvitoro zveWooCommerce. Uye zvakare ine mari yepasi yekutengesa kana 33 + $ 2.90 yeecommerce uye kudonhedza zvitoro.
2Checkout isarudzo yakanaka kune vanodonhedza pasi nekuvapo kwenyika zhinji. Inoshanda munyika dzinopfuura makumi masere nepfumbamwe pasirese mitauro gumi neshanu. Iyo ndeimwe yeakanakisa kiredhiti kadhi masuo uye inotsigira ese makuru makadhi echikwereti akadai seMastercard, Visa, Diners Club, American Express nevamwe. Uye inowanikwa mune dzakawanda nyika dzechitatu dzepasirese, uko iyo inoshandiswa musanganiswa neimwe yekubhadhara nzira.
5. Shopify Kubhadhara
Shopify yakabatana neStripe kuti vape yavo yega-yakavakirwa yekubhadhara gateway yeVashopify vashandisi. Iwo maoko pasi akanakisa ekubhadhara magedhi eShopify uye anowanikwa mukati Nyika dze11. Shopify Kubhadhara yakatosanganiswa nechitoro chako uye zviri nyore kwazvo kumisikidza uye kushandisa. Kana iwe ukashandisa Shopify kubhadhara paShopify, Shopify haizokubhadharise mari diki pane imwe neimwe yekutengesa uye inongobhadharisa iyo yenguva dzose mutengano fizi yemigwagwa yekubhadhara. Nekudaro, pane runyorwa rurefu rwekusiyiwa rwemhando dzezvitoro zvavasingagamuchire Uye kana ukasashandisa Shopify, saka haugone kushandisa Shopify Kubhadhara.
Tags Kudonhedza muripo magedhi, payoneer kudonhedza, Kudonhedza paypal, shopu kudonhedza, woocommerce kudonhedza
← Maitiro Ekusarudza Inobatsira Niches Ye Kudonhedza? → Kutanga kweUremu chaihwo, Zviyero Kurema uye Chargeable Kurema